''ဂီတအနုပညာမှာ ပန်းတိုင်ဆိုတာ မရှိဘူး။ နောက်ဆုံးနေရာ မရှိဘူး။ ပထမဆုဆိုတာ မရှိဘူး'' အဆိုတော် ? - Yangon Media Group
”ဂီတအနုပညာမှာ ပန်းတိုင်ဆိုတာ မရှိဘူး။ နောက်ဆုံးနေရာ မရှိဘူး။ ပထမဆုဆိုတာ မရှိဘူး” အဆိုတော် ?
ငါးခွေမြောက် တစ်ကိုယ်တော်အခွေအတွက် ပြင်ဆင်နေပြီး The Voice Myanmar သီချင်း ဆိုပြိုင်ပွဲတွင် Coach တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးနေသော တေးသံရှင် လင်းလင်းနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ယခုလိုပဲ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မေး- ဒီနှစ်ထဲမှာ တစ်ကိုယ်တော်အခွေထွက်ဖို့ ရှိ မလား။
ဖြေ- အခွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ငါးခွေ မြောက် တစ်ကိုယ်တော်အခွေကိုလည်း ရှေ့လေးခွေ တွေလိုပဲ ဒီအခွေကလည်း ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံ၊ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးထားတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာမလဲ တော့မသိဘူး။ သူများတွေပြောတာကတော့ တော် တော်ကွဲတယ်ပြောတာပဲ။ အခွေကတော့ မကြာခင် လာမယ်ပေါ့နော်။
မေး- တစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲ ရောလုပ်ဖြစ်မလား။
ဖြေ- One Man Show ကတော့ အခွေထွက်ပြီးရင်လုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားတယ်။
မေး-The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဃသခေ့ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ဖြစ်တာကိုလည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ- ပါဝင်ဖြစ်တာက ကျွန်တော် အရင်ကတည်းက The Voice အစီအစဉ်ကိုကြည့်ဖြစ်တယ်။ ကြည့်ဖြစ် တယ်ဆိုတာထက်ပိုတယ်ပေါ့နော်။ ပရိသတ်တစ်ယောက်လို့လည်း ပြောလို့ရတယ်။ နိုင်ငံတကာက Voice တွေ ကိုကအစ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ ကြိုက်တယ်ဆိုတာက ဂီတအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တော်ရုံတန်ရုံ အရည်အချင်းရှိရုံနဲ့ Level တက်မသွားဘူး။ အဲဒါ ကြောင့်ကြိုက်တယ်။ အခုတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလည်း ဒီလိုပွဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ပါဝင်ပေးဖို့ လာကမ်းလှမ်းတဲ့အတွက် ကျွန်တော်လည်း လက်ခံဖြစ်ခဲ့တာပါ။
မေး- ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာရော ဘယ်လို အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေ အဓိကထားပြီး တော့ ရွေးချယ်ခဲ့လဲ။
ဖြေ- အဓိကကျွန်တော်က ဖန်တီးမှုပိုင်းကိုပဲ အဓိကထားပြီးတော့ ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ အဆိုကောင်းတာ မကောင်းတာ၊ တော်တာ မတော်တာတွေနဲ့ယှဉ်ပြီးတော့ မရွေးဘူး။ ကျွန်တော်က ဖန်တီးမှုအပိုင်းကိုပဲကြည့်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့မူရင်းပုံစံအနေနဲ့ ဘာ တွေပါမလဲ။ အဲဒီဟာလေးတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ရွေးချယ်တယ်။
မေး- ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုလည်း သင် ကြားပေးရမှာဆိုတော့ ဘယ်လိုအရာတွေကို အဓိက ထားပြီးတော့ သင်ကြားပေးဖြစ်မလဲ။
ဖြေ- အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်နည်းနည်း တော့ လောဘကြီးတယ်။ ဒီလိုဗျ၊ ကျွန်တော်နဲ့သူတို့ဆိုတာက Voice ဆိုတဲ့သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ လာဆုံကြတာမှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်သူ့တို့ကိုအမြဲ ပြောတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုကြီးတဲ့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ပြိုင်ဆိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိပ်မက်ကိုတော့ ဒီပြိုင်ပွဲ ထက်ပိုပြီးတော့ ကြီးကြီးမားမားမှန်းပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးက Winner ဖြစ်တာပဲ လေ။ Winner ဖြစ်သွားတာနဲ့တော့ သူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သွေးသားထဲက ကြိုက်တဲ့ဂီတအနုပညာရဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဂီတအနုပညာမှာ ပန်းတိုင်ဆို တာမရှိဘူး။ နောက်ဆုံးနေရာမရှိဘူး။ ပထမဆုဆိုတာ မရှိဘူး။ ဒါ ကျွန်တော့်အမြင်ပါ။ ကိုယ်ရဲ့ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ်ရဲ့သက်ဝင်မှု၊ ကိုယ့်ရဲ့ဒီအပေါ်မှာ ထားတဲ့သက် ဝင်မှု၊ ကိုယ်ရဲ့ လုံ့လဝီရိယက ချဲ့ရင်ချဲ့သလောက်ကြီးတယ်။
Myanmar Idol Season3ရန်ကုန်မြို့ လူရွေးချယ်ပွဲကို မကြာမီ ပြုလုပ်တော့မည်
ကားသုံးစီးကို ဗုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲသည့် ဇာတ်ဝင်ခန်း ဆူးလေဘုရားလမ်းပေါ်တွင် ဆက်လက် ရိုက်ကူး
ဂရီမီယိုမှ လူငယ် ကွင်းလယ်ကစားသမား အာသာကို ဘာစီလိုနာ အသင်း ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့
ပြည်သူများ၏ တုံ့ပြန်ချက် နားထောင်ရန် ဖုန်း SMS စစ်တမ်းနေ့စဉ်ကောက်နေ
ဘားအံသံလွင်တံတား ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဝင်တိ??